Semalt को साथ तपाईंको वेबसाइटको कोर महत्त्वपूर्ण र पृष्ठ अनुभव संकेतहरू सुधार गर्दै
मुख्य वेब महत्वपूर्णहरू के हुन्?
पृष्ठ अनुभव सिग्नलहरू के हुन्?
कसरी तपाईंको वेबसाइटको कोर महत्त्वपूर्ण र पृष्ठ अनुभव संकेतहरू सुधार गर्न
ब्राउजर रिफ्लो न्यूनतम गर्दै
HTML कागजातहरूको फाईल आकार घटाउँदै
छविहरू संकुचन गर्नुहोस्
दर्शक/पाठकको दृष्टिकोणबाट वेब पृष्ठ अनुभव प्रदर्शन पृष्ठ लोड समयको रूपमा मापन गरिएको छ। यो समय जुन दर्शकले नयाँ पृष्ठको लागि अनुरोध गरेको क्षणको बीचमा हुन्छ र त्यो दृश्य दर्शकका लागि अवलोकन गर्नका लागि पृष्ठ पूर्ण रूपमा उपलब्ध हुन्छ। द्रुत लोड वेबसाइटहरू निरन्तर प्रदर्शन। यसको मतलब तिनीहरूले वेब पृष्ठमा बिस्तारै सामग्री प्रदर्शन गर्दछन् किनकि ब्राउजरले यसलाई लोड गर्दछ।
एक वेब पृष्ठ जसले यसको सामग्री प्रदर्शन गर्छ क्रमिक रूपमा दर्शकहरूको दृश्य प्रतिक्रिया प्रदान गर्दछ जुन पृष्ठ लोड हुँदैछ र प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूले अनुरोध गरेको जानकारी उपलब्ध हुने बित्तिकै दिन्छ।
त्यहाँ धेरै रणनीतिहरू छन् जुन एक व्यक्तिले वेब पृष्ठहरूको लागि प्रगतिशील रेन्डरिंग अनुकूलन गर्न प्रयोग गर्न सक्दछ।
एक छिटो पृष्ठले दृश्य-सामग्री पहिले दर्शकलाई प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ, अफ-स्क्रिन सामग्री प्रदर्शन गर्नु अघि (दर्शकलाई उपलब्ध नभएको सामग्री)।
एक छिटो पृष्ठ लोड र ती स्रोतहरु प्रदर्शित गर्नु पर्छ जुन भारी छैन। स्रोतहरू जस्तै छविहरू र भिडियोहरू लोड गर्न र भारी स्रोतहरू प्रदर्शन अघि पाठको रूपमा।
यस बीच, केहि तरिकाहरू वेब पृष्ठहरूको प्रगतिशील र द्रुत प्रदर्शन रोक्नको लागि ज्ञात छन्, उनीहरूको वेब पृष्ठ प्रदर्शनलाई कम गर्दै। ठूला टेबुलको प्रयोग, लेआउटको लागि पनि, केहि ब्राउजरहरूमा छिटो प्रदर्शन असक्षम गर्दछ। कागजातमा ढिला शैली प्रयोग गर्दै, यदि ती शैली पानाहरू प्रारम्भिक पृष्ठ लोडको लागि आवश्यक छैन भने, यसले प्रगतिशील रेन्डरिंगलाई पनि रोक्न सक्छ।
प्रत्येक व्यक्तिले वेबसाइट खोल्दा समय बर्बादलाई घृणा गर्दछ। र सबै भन्दा बढि प्रयोग गरिएको खोज इञ्जिनको साथ, गुगलले वेब पृष्ठको लोडि speed स्पीड प्रयोग गर्दै वेबसाइटको श्रेणी निर्धारण गर्न कारकको रूपमा, प्रोग्रामरहरूको लागि द्रुत पहुँचको लागि उनीहरूको वेबसाइटहरू अनुकूलित गर्न गम्भीर हुन आवश्यक छ।
धेरै कारकहरूले कोर वेब भिटालहरू र वेब पृष्ठ अनुभव संकेत प्रदर्शनलाई असर गर्दछ। केहि कारकहरु मा अनुरोध र प्रतिक्रिया डेटा को आकार, डेटाबेस क्वेरी को गति, सर्भर लामबद्ध गर्न को लागी अनुरोध को संख्या र एक चाँडै यो एक खास समयमा उनीहरु लाई कसरी सेवा गर्न सक्छ, र कुनै पनि दर्शक/प्रयोगकर्ता स्क्रिप्ट लाइब्रेरी को एक कार्यक्षमता मा सामेल छन्। व्यक्तिगत प्रयोग गरिरहेको हुन सक्छ।
वेबसाइटले कसरी वेबसाइटको कोर महत्त्वपूर्ण र पृष्ठ अनुभव स improve्केतहरू सुधार गर्ने भनेर हेर्छ।
२. कोर वेब भिटेलहरू के हुन्?
एक वेबसाइट को कोर भित्ताहरू खास कारकहरूको एक सेट हो जुन गुगलले वेब पृष्ठको सामान्य प्रयोगकर्ता अनुभवमा विचार गर्दछ।
यी कारकहरू तीन-पृष्ठ अन्तरक्रिया मापन मिलेर बनेको छ; उनीहरु:
सबैभन्दा ठूलो सामग्री पृष्ठ (LIP): यो परिभाषित गरिएको छ एक पृष्ठको वास्तविक उपयोगकर्ताको दृष्टिकोणबाट लोड गर्न यसले कति समय लिन्छ। यो उपकरणको स्क्रीनमा बहुमत सामग्री (पीसी वा मोबाइल) हेर्न लिंकमा क्लिक गर्ने समय हो।
पहिलो इनपुट ढिलाइ (FID): यो वेब पृष्ठसँग अन्तर्क्रिया गर्न प्रयोगकर्ताहरूलाई लाग्ने समयको रूपमा परिभाषित हुन्छ। तल केहि कुराकानीको उदाहरणहरू छन्:
शीर्ष वा प्राथमिक मेनूबाट छनौट लिँदै
साइटको नेभिगेसन मेनूमा लिंकमा क्लिक गर्दै
एक टिप्पणी बाकसमा प्रयोगकर्ता/दर्शक ईमेल ठेगाना प्रविष्ट गर्दै
संचयी लेआउट शिफ्ट (सीएलएस): यो पृष्ठको लोड हुने बित्तिकै स्थिर छ। अर्को शब्दमा, यो दृश्य स्थिरता हो। यसको मतलब यो पनि हुन्छ कि यदि वेब पृष्ठमा तत्त्वहरू पृष्ठ लोड भएको रूपमा वरिपरि सर्दछन्, तब त्यो वेब पृष्ठमा उच्च सीएलएस छ, जुन खराब मान्न सकिन्छ।
पृष्ठ अनुभव स What्केत के हो?
पृष्ठ अनुभव सिग्नलहरू मापन गर्दछ कि कसरी प्रयोगकर्ताहरूले वेब पृष्ठसँग अन्तर्क्रियाको अनुभवलाई यसको वास्तविक सामग्री मूल्य भन्दा परे देखिन्छ। यसमा कोर वेब भिटेलहरू, मापन प्रणाली समावेश छ जुन लोडिंग प्रदर्शन, घटनाहरू, र वेब पृष्ठको दृश्य स्थिरताको लागि आदर्श प्रयोगकर्ता अनुभव मापन गर्दछ।
यसले धेरै अवस्थित खोजी सals्केतहरू पनि समावेश गर्दछ, जस्तै मोबाइल-अनुकूल वेब वातावरण, सेफ-ब्राउजिंग, ईन्ट्रुसेभ ईन्टर्स्टिशियल दिशानिर्देशनहरू, र HTTPS।
Your. कसरी तपाइँको वेबसाइटको कोर महत्त्वपूर्ण र पृष्ठ अनुभव सिग्नल सुधार गर्ने
वेबसाइटको पृष्ठ अनुभव धेरै कारकहरूमा निर्भर गर्दछ, जस्तै:
विशेष वेब पृष्ठमा सामग्री
दर्शक/प्रयोगकर्ताको भौगोलिक स्थान
वेबसाइटको ब्यान्डविथ, आदि।
यो सम्भव र महत्वपूर्ण छ कि वेब पृष्ठको सामग्री हल्का बनाउँनुहोस् र यसको उपस्थिति, प्रकार्य र टेम्प्लेट परिवर्तन नगरी कम बाइट्स लिनुहोस्। यस रणनीति प्रयोग गर्नाले प्रयोगकर्ता/दृश्यकर्तालाई द्रुत पृष्ठ लोड अनुभव गर्न मद्दत गर्दछ।
यहाँ अन्य तरिकाहरू छन् जुन वेबसाइटको कोर भिटालहरू र पृष्ठ अनुभव संकेतहरू सुधार गर्न सकिन्छ। यसका साथै वेब विकास र एसईओ एजेन्सीलाई काममा लिइरहेको छ Semalt तपाईंलाई तल सूचीबद्ध कारकहरू सुधार गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
HTTP क्याचिंग: वेबमास्टरलाई सहि एचटीटीपी क्यासिंग हेडर सेट गर्नका लागि सुझाव दिइन्छ। यो दोहोरो फाइदाको रूपमा हुनेछ किनकि जब पनि पुन: भ्रमण (जब एक दर्शक/प्रयोगकर्ताले वेब पृष्ठमा एक पटक भन्दा बढी भ्रमण गर्दछ) वेब पृष्ठमा देखा पर्दछ, यो छिटो लोड हुन्छ, र वेब सर्भरमा कम लोड हुन्छ।
क्यास, संसाधनको स्थानीय प्रतिलिपिको एक संकलन, कार्य गर्दछ किनकि यी स्रोतहरू प्राय: परिवर्तन हुँदैन। जब एक ब्राउजरले स्थानीय प्रतिलिपि पुन: प्रयोग गर्न सक्दछ, यसले जडान सेट अप गर्न र समयको बचत गर्दछ र त्यो वेब पृष्ठ लोड गर्दछ।
क्याचलाई प्रभावी ढंगले बनाउने चाल भनेको HTTP क्यासिंग हेडरहरू हो जुन वेबसर्भरले पठाएको हो कि स्रोत कति लामो हुन्छ र कहिले अन्तिम परिवर्तन भयो। HTTP प्रोटोकोलले कसरी संसाधन मान्य छ भनेर जान्न तरिकाहरू दिन्छ। ती मध्ये एक मिति समाप्त हुने हेडर हो। म्याद समाप्त हुने हेडरले एक निश्चित मिति दिन्छ जुन एक संसाधन अमान्य छ। यस बिन्दुमा पुग्दा, ब्राउजरले फेरि स्रोतको लागि सोध्नेछ।
एक साधन कति लामो छ भनेर जान्ने अर्को तरीका भनेको अधिकतम-आयु हो। अधिकतम उमेर एक समान फेसनमा काम गर्दछ हेडरको म्याद समाप्त हुन्छ, केवल यसले निर्दिष्ट गर्दछ कि संसाधन कति लामो हुन्छ जब यो डाउनलोड हुन्छ एक विशिष्ट मिति दिनुको सट्टा डाउनलोड भए पछि।
जहाँसम्म, सामग्री प्रदान गर्ने हो जुन प्रयोगकर्तालाई अन्तर्-सुरक्षाको आवश्यक पर्दछ गैर-सुरक्षित HTTP जडानमा डाटा चोरीको जोखिममा प्रयोगकर्तालाई पर्दाफास गर्दछ। यो जान्नु महत्त्वपूर्ण छ कि कहिले र कहिले प्रयोगकर्ताहरूले कुनै पनि व्यक्तिगत जानकारी इनपुट गर्दछ, जस्तै चेकआउटहरू जहाँ भुक्तान जानकारी साझा गरिएको छ।
दर्शकहरूलाई सुरक्षित ब्राउज गर्न अनुमति दिन, एक ब्लगरले यो सुनिश्चित गर्नु पर्छ कि वेबसाइटसँग अप-टु-डेट SSL प्रमाणपत्र छ र तपाइँको कुनै URL हरू र पृष्ठ पृष्ठ संसाधनहरू HTTPS मा माइग्रेट गर्नुहोस्।
ब्राउजर रिफ्लूलाई कम गर्नुहोस्: रिफ्लो भनेको वेब ब्राउजि procedure प्रक्रियाको नाम हो जुन कागजातमा पुन: रेन्डरिंग भाग वा सबै कागजातको तत्वहरूको स्थिति र ज्यामितिहरूको पुन: गणनाका लागि हो।
विकासकर्ताहरूको लागि यो कसरी महत्त्वपूर्ण हो भनेर जान्न महत्त्वपूर्ण छ कसरी रिफ्लो समयको मूल्य बढाउन र बिभिन्न कागजात गुणहरूको प्रभावहरू बुझ्न। कागजात गुणहरूमा सीएसएस नियम दक्षता, बिभिन्न शैली परिवर्तन, र रिफ्लो समयमा DOM गहिराई समावेश गर्दछ।
प्राय: कागजातमा एकल तत्व रिफ्लो गर्न यसको मूल तत्वहरू र कुनै पनी तत्वहरू यसलाई पछ्याउनु पर्छ।
सब भन्दा बढि प्रयोग हुने तरिकाहरुलाई छ वटा कोटिहरुमा समूहीकृत गरीन्छ
पृष्ठ लोड अनुकूलन को बिभिन्न पक्ष:
सबै भन्दा कुशल ब्राउजर प्रदर्शन: एक पृष्ठ को ब्राउजर लेआउट सुधार।
सबै भन्दा कुशल क्यासिंग: एक अनुप्रयोगको डाटा र नेटवर्क को दूर तर्कसंगत राख्नु।
मोबाइल उपकरणहरूको लागि अधिकतम प्रयोग: मोबाइल नेटवर्क र मोबाइल उपकरणहरूको सुविधाहरूको लागि साइट ट्यून गर्दै।
राउन्ड-ट्रिपहरूको संख्या घटाउँदै: अनुक्रमिक क्रियाहरूमा प्रतिक्रिया रोटेशनको संख्या घटाउँदै।
ओभरहेड अनुरोध कम गर्दै: अपलोड आकार घटाउँदै।
HTML कागजातहरूको फाइल साइजलाई कम गर्दै: वेबसाइटको वेब पृष्ठ अनुभव सुधार गर्ने स्पष्ट प्रविधि HTML कागजातहरूको फाईल आकार कम गर्नु हो। यो गर्न विभिन्न तरिकाहरू छन्; यसले कठोर कम्प्रेसन, एक्यूपंक्चर-जस्तो आईडी, र वर्ग नाम परिवर्तनहरू समावेश गर्दछ।
HTML, जब MIME प्रकार पाठ/HTML का साथ डेलिभर हुन्छ - प्रोग्रामरहरूलाई केहि ट्याग छोड्ने अनुमति दिन्छ।
उदाहरणका लागि मानौं, यदि प्रोग्रामरसँग <Pp> सूची आईटम </ pp> को रूपमा चिन्ह लगाईएको वस्तुहरूको सूची छ भने त्यो प्रोग्रामरले <Pp> सूची आईटम लेख्न सक्दछ। वा एक अनुच्छेदको सट्टामा ऊ/उनी सामान्यतया नजिक हुन्छ </ q>, उसले/उनी मात्र प्रयोग गर्न सक्दछ <q> मेरो अनुच्छेद।
यो विधि परीक्षण गरिएको छ र विश्वास गरिएको छ, र यसले HTML, हेड र शरीरका साथ काम गर्दछ, जुन HTML मा आवश्यक पर्दैन। वैकल्पिक ट्याग छोड्नाले कसैको HTML औपचारिक रूपमा वैध राख्दछ जबकि फाइल आकार घटाउने र कोड धेरै सानो देखिन्छ। एक औसत कागजातमा यसको मतलब १० देखि २० प्रतिशत ठाउँ सफलतापूर्वक बचत गरिएको छ।
तस्विर छविहरू: छवि फाईलहरू अधिक जानकारीको साथ फाइलमा सम्मिलित हुन्छन्। उदाहरण को लागी, JPEG फाइल प्रकार बिभिन्न छवि प्रोग्रामहरु द्वारा लेखिएको हो, कार्यक्रमको नाम सहित तिनीहरुले लेखेका थिए। यस बीच, PNG छविहरू सजिलो तरीकाले स enc्केतन गरिएको तरिका परिवर्तन गरेर सानो बनाउन सकिन्छ।
यी रूपान्तरणहरूले डाटा नोक्सान गर्न सक्दैन। यसको मतलब संकुचित छवि असम्पीडित छविमा उस्तै उस्तै देखिन्छ तर कम बाइट्स प्रयोग गर्दछ र कम ठाउँ लिन्छ।
पछिल्ला केही वर्षहरूमा औसत वेब पृष्ठको आकारमा ठूलो वृद्धि भएको छ, र बाह्य वस्तुहरूको संख्या पनि समान अनुपातमा वृद्धि भएको छ। यससँग, केवल ब्रॉडबैंड प्रयोगकर्ताहरूले छिटो लोड प्रदर्शन समयको अनुभव गरेका छन्। अर्को तर्फ, संकीर्ण प्रयोगकर्ताहरूले ढिलो लोड प्रदर्शन समयको अनुभव गरेका छन्।
प्रत्येक पचास पचास बाह्य वस्तुहरू स्वामित्व भएका सय वेब पृष्ठहरूको साथ, ओभरहेड वस्तुले वेब पृष्ठ लोड गर्न ढिलाइ गर्दछ। CSS प्रयोग गरेर जाभास्क्रिप्ट वा CSS फाईलहरू मर्ज गरेर, EO को संख्या घटाउँदै, र ग्राफिकल छापहरू CSS मा रूपान्तरण गरेर HTTP अनुरोधहरू घटाउनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सीप साबित भएको छ। वेब प्रदर्शन अनुकूलनकर्ताहरू।
यी विधिहरू प्रयोग गरेर र वेब पृष्ठमा पृष्ठ अनुभव अप्टिमाइजेशन आविष्कारहरू अपनाएर, प्रोग्रामर/लेखकले उसको/उनको वेब पृष्ठ अनुभव सals्केत सुधार गर्न सक्दछ। यसले सकारात्मक रूपमा दुबै छोटो अवधि र दीर्घकालीन रनहरूमा प्रभाव पार्नेछ, जुन कुञ्जीमा हुनुको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सबैभन्दा ठूलो लक्ष्य हो।